Mari-nehupfumi, 10 Ndira 2019
China 10 Ndira 2019
Ndira 10, 2019
Vana Chiremba Vodzokera kuMabasa?
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr Mthabisi Bhebhe, vaudza Studio7 kuti sangano ravo ramisa kuramwa kwaro mabasa uye nhengo dzaro dzave kuzodzokera kubasa, vachiti izvi zvinotevera kuvimbisa kwehurumende kugadzirisa zvichemo zvavo.
Zanu-PF neMDC Dzokakavadzana paMamiriro Akaita Zvinhu Munyika
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa avo vasvitsa mazuva zana nemakumi matatu nemanomwe vari muhofi nhasi kubva zvavatora mhiko gore rapera vari kuvimbisa kuti gore ra2019 zvinhu zvichatanga kusanduka munyaya dzezvehupfumi.
Hurumende Inotadza Kuwirirrana neVashandi Vayo
Hurumende yatadza neChina kuwirirana nevashandi vayo panyaya yemari dzemihoro zvichitevera musangangano waitwa nhasi pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council.
Mapurisa Akarova Mutori weNhau Oshorwa Zvakadzama
Masangano anomirira vatapi venhau ashora mapurisa eZimbabwe Republica Police nekurova kwaakaita mutori wenhau we263Chat, Costa Nkomo, nezuro apo aiita basa rake.
Zvinhu Zvichakaminama Muzvipatara zveHurumende
Apo kudzokera kubasa kwavana chiremba kwange kusati kwaziviswa kune veruzhinji, vamwe varwere vange vachiburitswa nehama dzavo muchipatara chepaChinhoyi vachinorapirwa kumba sezvo muchipatara ichi manga musina vana chiremba.
Ndira 09, 2019
VaMnangagwa Voronga Kushanyira Dzimwe Nyika Vachinzi Vari Kusiya Zimbabwe Iri Mukanwa Mamupere
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vari kusimuka munyika svondo rinouya vakananga kunyika shanu dzinoti Russia, Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan neSwitzerland.
Vabereki Vakawanda Vochema neMari Dzechikoro Dzavanoti Dzakawandisa
Mumwe wevabereki ava, Amai Irene Muzondo vekuArcturus, vaudza Studio7 kuti havasi kufara nekukwidzwa kwakaitwa mari yechikoro panguva iyo hurumende yakati zvikoro zvinofanira kutanga zvakumbira mvumo yekukwidza mari dzechikoro kwairi.
Mhuri Dziri Kurima kuSikato kuMasvingo Dzoramba Kubviswa neHurumende Munzvimbo Iyi
Sadunhu wenzvimbo yeSikato kuMasvingo, VaTitison Haruzivishe pamwe nasabhuku Henry Makusha, vasungwa mushure mekuramba kusaina magwaro abva kuhurumende ekuti vaudze vanhu vavo kuti vabude muminda iyi.
VaTrump Vanoti Havasi Kuzodududza Pakuvaka Mudhuri Kunyangwe Mamwe Mapazi eHurumende Avharwa
Mutungamiri wenyika yeAmerica VaDonald Trump vatura mashoko kunyika yavo kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC vachiti vamwe vapoteri vave kukanganisa magariro evanhu.
Nhengo dzeZanu PF Dzinoti Hadzisi Kutambira Motokari dzeParamende Pari Zvino
Mukokeri wenhengo dzeZanu PF muparamende, uye vari mumiriri weGutu South mudare reparamende, VaPupurai Togarepi, vanoti hurumende iri kuda kuisa maziso nezvikwanisiro kune dzimwe nyaya dziri kunetsa vana veZimbabwe, kwete kutanga nezvido zvavo sezvo ivo vari vashandi vevanhu.
Vashandi veHurumende Vanozivisa Kuti Vacharamwa Mabasa Panopera Mazuva Gumi neMana
Mutsamba yakasvitswa kuboka republic Service Commission neChipiri, sangano iri rinoti hurumende haina zvairi kuitawo mukugadzirisa dambudziko rakatarisana nevashandi vayo rekushaikwa kwemari iri.
Ndira 08, 2019
Kukwira Kwaita Mitengo yeZvinhu Munyika Kworwadza Vakawanda.
Veruzhinji vari kuchema chema zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu inonzi yakwira zvakanyanya kubva payanga iri mumazuva ehurumende ya va Robert Mugabe. Vataura ne Studio7 vati saga refotireza ravaitenga madhora makumi matatu, nhasi vave kuritenga madhora makumi matanhatu.
Nyaya Yekuti Amai Mugabe Vane Mapurazi Gumi neMatanhatu Yokonzera Mutauro
ZESA Yovimbisa Kuti Magetsi Achaita Zviri Nani Nhasi Apo Zvimwe Zvipatara Zvotadza Kuita Basa
VaObey Sithole Vanotungamira veChidiki muMDC Vopihwa Yambirwa neMapurisa
VeMabhizimisi Vanoti RBZ Ngaivape Mari yeKunze Yakati Wandei Kana Vatengesa Zvinhu
VaMnanagwa Voita Musangano neMapato Madiki MDC yaVaChamisa Ichiti Kutungana kweMbudzi